c++ complier လေးလိုချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
c++ complier လေးလိုချင်လို့
September 2010 edited February 2011 in C++
windows7နဲ့ သင့်တော်မယ့် c++ c omplier လေးလိုချင်လို့ပါ။ ရှိရှင်ရှဲကြပါလို့
MinGW or Visual C++ Express လိုဟာသုံးလို့ရတာပဲ အလကားရတာပါ
ကျေးဇူး အထူတင်ရှိပါသည် ကိုလူပျိုကြီးခင်ဗျား
အဲဒါကို အရင်ဒေါင်းရသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား။ ပြီးထပ်ဒေါင်းရသေးတယ်နော် ဟုတ်တယ်မလား။ ဒေါင်းပြီးရင် installer ကို အိမ်မှာ ယူ ပြီး install လုပ်ရတာမှာလား
နဲနဲ့တော့ အလုပ်ရှုပ်တယ် active မှာ ဝယ်လို့ရတယ်မလား
Visual Studio ကတော့ ဝယ်လို့ရမှာပါ မခက်ပါဘူးပေါပါတယ် အဲဒါကတော့ သွားသာဝယ်လိုက်ပါ။ MinGW ကတော့ ဝယ်လို့ရမယ်မထင်ဘူး အဲဒါလိုချင်ရင်တော့ ဒေါင်းမှပဲရမယ်။
ခဏနေဦးဗျ ကျွန်တော် ဘယ်လို run ရမယ် မသိဘူး။ run တဲ့ button လည်းမတွေ့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံလေးနဲ့ ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။ ကျွန်တော်က နည်းနည်းပိန်းလို့
Run တဲ့ဟာ မတွေ့ဘူးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ Visual Studio ကတော့ IDE ပါတာပဲ Run လို့လွယ်မှာပါ။ MinGW ကတော့ Compiler သက်သက်ပဲ IDE မပါဘူး လိုချင်ရင်တော့ Eclipse or Netbeans or Dev-C++ လိုဟာကိုသုံးရမယ်
မဟုတ်ဘူးကျွန်တာ်ပြောတာ က ဥပမာ
အဲဒါတွေကို ရေးပြီးသွားပြီး complie & run ရမှာကို မသိတာ။
which app are u using ? I think, Visual C++ can run with F5. You can find from Build Menu
ဟုတ်တယ်ကိုစေတန် f5 နဲ့ run ရတာ ကျွန်တော် ရေးလည်းရေးပြီးသွားကော f5 နိပ်တာ ရလညး်ရဘူး။
compile က control f9 ..
Run က alt f9 . လို.ထင်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ ..
ကျနော်ကို borland++ ဆိုတဲ့ ဟာလေး ရှာပေးကြပါဗျာ။
ပြီးတော့ အဲဒါကို ဘယ်မှာ သုံးကြလည်းဆိုတာလေးလဲ ရှင်းပြပေးကြပါခင်ဗျာ။
google search မှာ ရှာကြည့်လိုက်ရင် ရပါလိမ့်မယ်
Visual C++Express Edition က Free version ပါ... Standard Template Library ပဲသုံးပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ Express Edition နဲ့လုံလောက်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် Expression Edition မှာ MFC Application ရေးလို့မရပါဘူး...MFC Application ရေးချင်ရင် Visual Studio Professional version ကို၀ယ်ရပါမယ်... မ၀ယ်ချင်ဘူး pirate လည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုရင် 90 days trial ကို download ချလို့ရပါတယ်...
Program အသေးလေးတွေ စမ်းဖို့က -
၁. Visual Studio ကိုဖွင့်ပါ...
၂. File --> New --> Project--> Win32 Console Application ကိုရွေး....(Project Name ပေးဖို့မမေ့နဲ့)
၃.Wizard ပေါ်လာရင် Next ကိုနှိပ် Precompiled header check b၀x ကိုဖြုတ် Finish ကိုနှိပ်
ရှိထားတဲ့ source တွေကိုဖျက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် coding တွေနဲ့စမ်းလို့ရပြီ... Compile လုပ်ချင်ရင် F5 ပါ...
၁. program ရေးတဲ့နေရာမှာ mouse ကိုသိပ်အားမကိုးစေချင်ဘူး...အတတ်နိုင်ဆုံး keyboard နဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်ပါစေ...
၂. google မှာ သိချင်တာမှန်သမျှရှာတတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကိုမွေးပါ...
Borland C++ 5.02 Download: